Kismaayo News » Taabit oo kafaalo qaaday gabadhii xubinta taranka laga dhaawacay
Taabit oo kafaalo qaaday gabadhii xubinta taranka laga dhaawacay
Kn: Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ayaa kafaalo qaaday Faa’isa Maxamed Cabdi oo ahayd gabartii uu askariga Puntland xabadda ooga dhuftay xubinta taranka kadib markii uu ku fashilmay inuu kufsado.
Faa’isa oo dhawr qaliin lagu sameeyay ayaa dalka wax looga qabanwaayay waxayna u baahatay in dalka dibaddiisa lagula soo tacaalo. Khayr Allaha siiyee Gudoomiye Taabit ayaa ka farxiyay Faa’isa iyo waalidkeed oo talo ku ciirsantahay wuxuuna balanqaaday inuu dhabarka u ridanaayo in Faa’isa lagu soo dabiibo dalka dibaddiisa.
Askarigii falkaa fooshaxun u gaystay Faa’isa Maxamed oo 16 jir ah ayaa markuu u soo baxsaday dhinaca Jubbaland ay ciidamada amaanka Jubbaland soo qabteen asagoo duleedka Kismaayo ku dhuumaalaysanaya kadibna ku celiyeen Puntland oo ahayd meesha uu falka ka gaystay. Wali wax xog ah kama hayno ciqaabta la marsiiyay gacan ku dhiiglaha.
Bahda KismaayoNews waxay Eebe uga baryaysaa inuu Faa’isa siiyo caafimaad soo degdega, bulshada Soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa in gabartaa yar loo gargaaro oo ugu yaraan loo duceeyo.